डोटीमा लकडाउनमा अहोरात्र खटिएका प्रहरीको सडकमै बास – Nepal Trending
डोटी । डोटी जिल्लामा खटिएका प्रहरी सडक मै बस्न बाध्य भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी निरीक्षक करन बोहराका अनुसार जिल्लामा दरबन्दी अनुसार प्रहरी नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या थपिदा सडकमै बास बस्नु परेको बताए । को’रोनाको संक्रमण र त्यसपछि नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनमा अहोरात्र खटिएका प्रहरीको सडकमै बास हुन थालेको हो ।
पछिल्लो समय भारतका विभिन्न शहरबाट कैलालीको गौरीफन्टा नाका र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट नेपालीको उद्धार सुरु भएपछि प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय जानका लागि समेत फुर्सद नपाउने गरेको बताएका छन् । डोटी जिल्लामा चार सय २६ जना को दरबन्दी रहे पनि अहिले दुई सय २६ जना प्रहरी कर्मचारी मात्रै रहँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको प्रहरी निरीक्षक बोहराले बताए ।
गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकाबाट भारतमा अलपत्र नेपालीको उद्धार सुरु भएपछि प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय जानका लागि समेत फुर्सद पाएका छैनन् । ‘भारतमा अलपत्र दाजु भाईको उद्धार सुरु भए देखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत प्रहरीको समेत भेट हुन छोडेको छ,’ ईलाका प्रहरी कार्यालय दीपायलका प्रमुख प्रहरी नायव निरिक्षक रमेश शाहीले भने, ‘खाना खाने समयमा मात्रै एक पटक भेट हुन्छ। बाँकी सयम सडकमै बिताईरहेका छौ।’
उनका अनुसार अहिले बस्ती भएको क्षेत्रमा भारतबाट आएकाहरुबाट कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीवासीले गाडी समेत रोक्न अवरोध गरिरहेका छन्। उनले भने, ‘वन क्षेत्रमा गाडी रोकेपछि भारतबाट फर्किएका नेपालीहरु फ्रेस हुने गरेका छन्। सो समयमा प्रहरी कर्मचारी पनि सडकमै सुतेर आराम गर्छन्।’
नेपालमा भारतीय न्युज च्यानल बन्द ! यो निर्णय कस्तो लाग्यो ?
कमल थापा भारतीय मिडिया विरुद्ध गर्जिए, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीका बारेमा जे पायो त्यही…
भारतको ईशारा सरकार ढलाउन लागेको भन्दै देशभर प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा प्रदर्शन